Fomba 8 hampiatoana ny fahatsapana ho voafandrika amin'ny fiainana - Blog
Fomba 8 hampiatoana ny fahatsapana ho voafandrika amin'ny fiainana
Ny fikatsahana fahasambarana amin'ny fiainana dia dia sarotra sarotra atrehana loza sy andraikitra.
Amin'ny fikatsahantsika fahasambarana, amin'ny fikatsahana izay tadiavintsika amin'ny fiainana, dia mora loatra ny mahatsapa ho voafandriky ny hetahetantsika, ny fahombiazantsika, ny tsy fahombiazantsika ary ny andraikintsika.
Indraindray ireo zavatra ireo dia apetraky ny hery ivelany. Indraindray izy ireo dia zavatra apetratsika amin'ny tenantsika hahatratra ny tanjontsika.
Ny tanjona tsy hahatsapa ho voafandriky ny fiainana dia tokony ho lohalaharana ao an-tsain'ny tsirairay, satria be dia be ny lalana mankamin'ny fiainana sambatra sy mahomby ka tsy misy antony tsara tokony tsy hikatsahana zavatra mahasalama.
Salama kokoa, tsy voatery hoe 'tsara kokoa'.
Satria ny teny tsara kokoa dia mety ho teny diso rehefa mieritreritra ny ahitra maitso kokoa amin'ny lafiny hafa amin'ny fefy ianao, dia miampita ny fefy ianao, ary avy eo mahita fa maitso fotsiny ny ahitra satria sandoka.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny miasa amin'ireo zavatra ireo ao an-tsainao manokana, mamorona ny lalanao manokana, ary manafaka ny tenanao amin'ireo fahatsapana ho voafandrika amin'ny fiainanao manokana.
1. Miaina araka izay tratranao.
Ny marketing sy ny dokam-barotra amin'ny ankapobeny dia mampiroborobo an'ity treadmill tsy misy farany fikatsahana fahasambarana ity.
Ny tiana ambara dia ny hoe mila mitady vola bebe kokoa ianao hividianana trano lehibe kokoa, hividianana fiara tsara kokoa, hindrana findramam-bola hanatrehana ny sekoly nofinofisinao, hividianana akanjo marika marika ireto, hividianana fitaovana elektronika vaovao na dia mbola lafo tanteraka aza ny zavatra novidinao. tsara!
Mitohy hatrany ary mitohy hatrany.
Ny fiainana ambanin'izay anananao dia manome anao fahalalahana izay tsy ananan'ny olona amin'ny fikatsahana zavatra tsy tapaka.
Rehefa dinihina tokoa, mbola mila miasa ireo ora ireo ianao handoavana ireo trosan'ny trosa ireo mba tsy hamerina ny entanao.
Misy ny teny izay ampiasain'ny olona sasany amin'ny asa ahazoana vola be, fanaovana sorona avo lenta, 'ny fehin-tànana volamena.'
Mahazo vola be dia be izy ireo, saingy gadan'io vola io mba haharaka ny fomba fiaina amin'izany vola izany.
Fandrika azonao esorina amin'ny fiainana ambany araka izay tratry ny anananao izany.
ahoana no itiavanao olona
roa. Ekeo ny andraikitrao amin'ny safidinao sy ny zavatra ataonao.
Tsy hisy hanavotra anao amin'ny fanapahan-kevitrao.
Tsy misy olon-kafa hikarakara fatratra ny fahasalamanao sy ny fiainanao araka ny hitiavanao azy.
Na ny olona be fitiavana indrindra sy be fanoloran-tena aza dia mbola manana antontam-piandraiketana sy fiainana karakarainy manokana.
Betsaka loatra ny olona mandany ny fotoanany mitaraina amin'ny maha-mahatsiravina ny fiainany nefa tsy manao ezaka firy hanatsarana ny toerana misy azy ireo.
Eny, indraindray misy zavatra mahatsiravina mitranga amin'ny fiainana izay tsy azontsika atao mihitsy.
Ny hany azontsika atao dia ny mandray ny dona, manandrana mihodina miaraka aminy, mitady fomba hanasitranana azy io, ary mandroso hatrany.
Saingy, misy fotoana marobe izay ananantsika safidy afaka manafaka antsika amin'ny toerana ratsy eo amin'ny fiainana.
Mety tsy tiantsika ireo safidy natolotra antsika, nefa safidy ihany ireo.
Olona mandany ny fotoanany amin'ny fanomezana tsiny ny olon-drehetra sy ny zavatra hafa rehetra satria mahatsiravina ny fiainany dia matetika manandrana tsy mijery fitaratra.
Saingy tsy maintsy mijery fitaratra isika indraindray, satria tsy misy olon-kafa afaka manao ny asa ho antsika.
3. Miezaha hanana fomba fiaina mahasalama kokoa.
Ny fomba fiaina mahasalama dia mandoa vola amin'ny faritra maro amin'ny fiainanao.
Ny tsy fananana fomba fiaina mahasalama dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny eritreritra, fihetsem-po ary ny fiainana.
Ny zavatra tsotra toy ny fihenan'ny sakafo mahasalama apetrakao amin'ny vatanao, ny fanaovana fanatanjahan-tena kely matetika, ary ny fahazoana torimaso sahaza azy dia mety hanatsara ny toe-tsainao sy ny fomba fijerinao.
Ny torimaso no fototry ny fomba fiaina mahasalama. Ao amin'ny dingana lalina indrindra amin'ny torimaso ny atidohantsika dia mamokatra ireo akora simika manampy amin'ny fitazonana ny toe-pontsika sy ny fandanjalantsika mandritra ny tontolo andro.
Raha tsy mahazo torimaso ampy na mety ianao dia hijaly noho izany ny toetranao sy ny fihetsem-ponao.
Ny sakafo sy zava-pisotro dia solika hampandehanana anao. Sakafo ho an'ny sainao izy ireo ary manome hery anao mandritra ny andronao.
Ny fanovana tsotra azonao atao dia ny misotro tsy misy siramamy, zava-pisotro misy kafeina ary rano bebe kokoa. Io fanovana kely io dia afaka manome fanatsarana lehibe amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana.
Fomba 9 hanovana ny sainao rehefa mahatsiaro ho resy na kivy
'Fiainana tanteraka amin'ny fiainana feno' dia torohevitra maharikoriko tokony harahina (+ Izay tokony hataonao)
4. Raiso ny fiovana rehefa mahita toe-javatra tsy manompo anao intsony ianao.
Ny fiainana tsara iainana dia iray amin'ny fitomboana sy ny fiovana.
Tsy zavatra azonao sorohina izany raha miezaka miaina fiainana miabo sy miabo.
Hanao fanovana ny fomba fijerinao ianao, miasa amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po, ary ho hitanao fa mihoatra ny toe-javatra sasany sy ny olona ianao.
Mafy ny manjo ny toe-javatra iray. Mpinamana be dia be ary sarotra kokoa ny fianakaviana.
Tsy midika izany fa tokony manomboka mihazakazaka ianao ary avelao any aoriana ny olona sy ny zava-drehetra.
Ny zavatra tokony hojerenao dia raha manampy fanampiny misy dikany ny toe-javatra sy ny olona amin'ny fiainanao.
Hahatsapa ho voafandrika ianao raha ny namanao olona misy poizina iza no manao ratsy Izy ireo dia mety hiafara amin'ny fitarihana anao hiverina ary hampihemotra ny fandrosoanao.
Tsy ny rehetra te-hivoatra. Tsy ny olon-drehetra no te hanandrana na hihevitra fa mety ho olana izy ireo.
Ny olona sasany dia mionona amin'ny filomanosana amin'ny fahantrany manokana satria mahazo aina sy mampatahotra ny fiovana .
Mila mandray ny fanovana ianao ary miandrandra ny fotoana mety hitranga raha te hanafaka ny tenanao tsy ho voafandrika ianao.
5. Mianara mandà ny olona sy ny toe-javatra.
Ny fahaizana miteny 'tsia' dia fahaiza-manao manan-danja hampivelatra.
Misy foana ny zavatra mitranga, misy olona mila fanampiana foana, misy hatrany ny andraikitra sy ny zavatra hotanterahina.
Olona iray ihany ianao eto amin'izao tontolo izao feno fihetsika sy zava-mitranga. Raha tsy manao ianao mianatra miteny tsia , ho hitanao fa mihidy amin'ny andraikitra izay mety tsy mety aminao sy amin'ny fiainanao ianao.
Ankoatr'izay, hararaotin'ny olona tanteraka ny tsy fahaizanao miteny tsia.
Hitodika any aminao izy ireo satria fantatr'izy ireo fa eny no ekenao ary azon'izy ireo atao ny manararaotra izany manohitra anao mba hikororohana bebe kokoa amin'ny sorokao.
Tokony ho ianao no misoroka ny olona tsy hanararaotra ny hatsaram-panahinao na ny fahavononanao hanampy, raha tsy izany dia ho hitanao fa be enta-mavesatra ianao fa tsy anao.
Tsy maninona ary mahasalama tanteraka raha tsia.
Raha ny marina, izany no fomba tokana tsy hivadihan-doza ao ambanin'ny antontam-bato tsy anao.
6. Manaova zavatra bebe kokoa hahasambatra anao.
Fomban-drazana ve izany? Misy zavatra hafahafa kely? Zavatra tsapanao fa tsaraina ianao, toa tsy vitanao na tsy tokony nataonao?
Raha mbola tsy mandratra olona izany dia ataovy ihany.
Ny olona dia tia mandanjalanja noho ny tsy fihetsiny amin'ny fomba heveriny fa mety, fa iza kosa izy ireo mitsara anao ary ny fiainanao?
Manan-jo hitady fahasambarana ianao ary hanao ireo zavatra mahasambatra anao.
Ny fandaniana ny fotoana sy ny herin'ireo zavatra ireo dia ampahany lehibe amin'ny fikarakaran-tena.
Ny fiainana dia feno negativa sy monotony. Indraindray, ny monotony dia mety hahatsapa ho ratsy kokoa noho ny negativa, satria afaka mamela ny fiheverana fa hijanona ny zavatra.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny maka fotoana hijerena, hanao ireo zavatra mahasambatra anao, ary miaina amin'ny fomba izay misy dikany ho anao sy ny fahitanao an'izao tontolo izao.
Mety tsy mifanaraka amin'ny lasitra stereotypical antenain'ny olona manodidina anao na ny fiarahamonina aminao izany - ary tsy maninona.
Ny fahasambaranao sy ny fahafahanao dia tsy an'ny mpitsara amin'izao tontolo izao hitsara.
7. Atsofohy amin'ny fiainanao ny fahaizan-tsaina sy ny famoronana.
Ny olona dia tsy masinina ampy fitaovana hiatrehana fandaharam-potoana henjana sy mitafy vy hatao mandra-pahafatiny.
Indraindray ny fahatsapana ho voafandrika dia tsy misy ifandraisany amin'ny tena voafandrika, fa ny fahatsapana ho voafandrika noho ny monotony amin'ny fiainana.
Mety ho tonga amin'ny fahazarana mahazatra ianao raha miasa tsy tapaka miaraka amina faktiora handoavana, vava homena ary andraikitra.
Fa izany ve no karazan'olona tianao?
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy.
Ny ankamaroan'ny olona dia mila fientanam-po, famoronana ary -tsitrapo amin'ny fiainany.
Mitadiava fomba hikarohana ny sasany amin'izany.
Tsy mila sarotra na lafo io. Mandehana mitsangatsangana amin'ny valan-javaboary iray eo an-toerana, mandehana mandeha fiara, mamorona zavatra ho an'ny famoronana.
Ataovy ampahany tsy tapaka amin'ny fandaharam-potoananao isan-kerinandro ireo adiresy kely ireo mba hanomezana ao an-tsainao ny fialan-tsasatra amin'ny fiainana an-tany misy ny 'fiainana feno andraikitra.'
8. Mitadiava fanampiana matihanina amin'ny matihanina ara-pahasalamana voamarina.
Betsaka ny antony mety hahatsapan'ny olona iray fa voafandrika amin'ny fiainana izy. Ny antony dia mety tsy zavatra tsotra sy mora fitetezana.
Ny fahatsapana fa voafandrika amin'ny fiainana dia mety hanondro fahaketrahana na olana ara-tsaina hafa mahazo ny olona iray.
Mety ho mendrika ny miresaka amin'ny matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina momba ny zavatra tsapanao sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao raha hitanao fa sarotra aminao ny manetsiketsika ilay fahatsapana ho voafandrika.
Ny fiainana dia tsy mila mahatsapa ho toy ny niteraka sy raharaha be - fa tena afaka mandany fotoana sy ezaka mifantoka hanoloana ny fahatsapana ratsy miaraka amin'ny fahazarana mahasalama sy fiainana manome hery anao, fa tsy mahatsiaro ho enta-mavesatra.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hialana amin'ny fiainanao ankehitriny? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
ny fomba handresena ny hatezerana sy ny lolompo
ahoana no hitiavako
farito ny fitiavana olona
rehefa manomboka misintona ny bandy
inona no dikan'ny nxt